Efa misy izao ny Lingua Okrainiana vaovao! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2019 11:27 GMT
Faly aho manambara aminareo fa efa misy ankehitriny ny Lingua Okrainiana vaovao !
Olga Yaroshenko no Mpitantana ny Fandikan-teny Okrainiana, monina ao an-tanàndehiben'i Dnipro, Okraina. Manana ny mari-pahaizana master amin'ny fitantanana ny Haino Aman-jery, ny Dokambarotra ary ny Seraseram-bahoaka (2008) izy ary ny mari-pahaizana amin'ny Toekarena Iraisam-pirenena (2009) tao amin'ny Oniversitem-panjakana Dnipro , Okraina. Olga no Mpitantana ny Tetikasa sady Mpitantana ny Seraseram-bahoaka ao amin'ny ONG sy mpanao asa soa maromaro izay miasa amin'ny lohahevitra toy ny fampandrosoana maharitra, fanampiana ara-tsosialy, ​​lafiny samihafa amin'ny fanampiana ireo mpitsoa-ponenana, kamboty, sembana ary ny olona tsy salama, ary ny fampianarana, kolontsaina ary ny famoronana ihany koa .
Mbola fampahafantarana bebe kokoa momba an'i Olga, tiany ihany koa ny mandray anjara sy mikarakara hetsika sy tetikasa mba handraisana anjara amin'ny famahana ny fanamby manerantany. Liana amin'ny famenoana ny hantsara ara-baovao amin'ny fitantaran'ny haino aman-jery Okrainiana momba ny lohahevitra aseho ato amin'ny GV i Olga .
Araho ao amin'ny Facebook sy LinkedIn izy !
Ary raha mahaliana anao ny handray anjara amin'ny Linguas Igbo na Santali dia fenoy ity takelaka ity ary hifandray aminao izahay! Ary miangavy anao hizara izany amin'ireo tambajotranao 🙂